Miracast ဖန်သားပြင်မျှဝေခြင်း / mirror Shortcut ကို | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » လူနေမှုပုံစံစတဲ့ » Miracast ဖန်သားပြင်မျှဝေခြင်း / mirror Shortcut ကို
Miracast ဖန်သားပြင်မျှဝေခြင်း / mirror Shortcut ကို APK ကို
တဦးတည်းကလစ်တစ်စမတ်တီဗီသို့မဟုတ် (Chromecast ကိုလိုမျိုး) miracast dongle တွေနဲ့သင့်ရဲ့ screen ကိုမျှဝေပါ! ဒီ application ကိုအင်္ဂါရပ် screencasting အဆိုပါ Miracast ပြင်ပ display ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသောဖြတ်လမ်းနှင့်ဝစ်ဂျက်ကိုထောက်ပံ့ပေးအန်းဒရွိုက် 4.2 နှင့်အထက်ထည့်သွင်း! ဒီ app နှင့်အတူ, သင်ပိုမိုအဆင်ပြေသင့်ရဲ့ screen ကို mirror သို့မဟုတ်ထောက်ခံ applications များအနေဖြင့်သွန်းအင်္ဂါရပ်ကိုအသုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
အဆိုပါဖြတ်လမ်းကအမြဲအလုပ်မဖြစ်ပေမယ့်သင်ကအကူအညီလိုလျှင်မူကား, အကျင့်ကိုကျင့် screencasting နှင့်မည်သို့သူတို့ကိုသင်ရှိပါကပြဿနာများကိုဖြေရှင်းဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းပိုမိုသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်အကူအညီ button ကို click နှိပ်မထားဘူး။ လိုအပ်ပါကထပ်မံအကူအညီတောင်း app ကိုအတွင်းမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများထုတ်စစ်ဆေး!
ဤလျှောက်လွှာကိုအောက်ပါထုတ်ကုန်များနှင့်ပိုမို ချ. များအတွက် Settings မျက်နှာပြင်ရန်သင့်အားဘော်တတ်:
- က Google Chromecast ကို
- Asus က Miracast Wireless Display Dongle
- အမေဇုန်မီးသတ်တီဗီ Stick
installed အခါ, သငျသညျကိုတိုက်ရိုက် click တစ်ချက်နှင့်အတူ Miracast setting များကိုမျက်နှာပြင်ရန်သင့် Miracast ရန်သင့် device ကိုရဲ့ Display ကိုပေးပို့ဖို့ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟု "Miracast Widget လေး" ဟုခေါ်ဝစ်ဂျက်ထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ထိုကဲ့သို့သောသင့် TV အဖြစ်ပြင်ပ display ကို enabled သို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်! သင်သည်သင်၏မျက်နှာပြင် ချ. နေကြသောအခါ, ဝစ်ဂျက်မျက်နှာပြင်၏အမည်ကိုဖော်ပြရန်မည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျ disconnect လုပ်ဖို့ထပ်ဝစ်ဂျက်ကို click နိုင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင်တစ်ဦး launcher icon ကို setting များကို ချ. ၎င်း Miracast မျက်နှာပြင်မှတိုက်ရိုက် setting များကို App ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်ကြောင်းကိုသင်၏ app ကိုဗန်းမှဆက်ပြောသည်လိမ့်မည်။
Miracast ဖန်သားပြင်မျှဝေခြင်း / mirror Shortcut ကို
7.21 ကို MB
Miracast - ဝိုင်ဖိုင်ပြရန်
spacedesk (multi …
တီဗီ + သို့ ... သို့ကာစ်